Kismaayo News » FAR-DAMBE : Qaranka Beylahda ah
FAR-DAMBE : Qaranka Beylahda ah
Kn: Mudo afar todobaad ah waxaa dalka ka taagan qalalaase siyaasadeed, kaasi oo aanan wax kasoo reyn ah lahayn. Wuxuuse walwalka ugu badan ka taaganyahay hawlihii qaran ee la qaban lahaa oo hakad galay iyo mas’uuliyadii dowladnimo ee dalka oo gabi ahaanba beylah ah.
Khilaafka madaxda ee u talaabay lamaaha kala ee dowlada sida baarlamaanka, golaha wasiirada iyo waliba shaqaalaha rayidka ah ayaa waxaa hadda soo baxay saansaan muujineysa in uu sidoo kale u talaabay xagga laamaha amniga dalka, taasi oo leh halista ugu weyn ee xiligan la filan karo.
Dhawaan waxaa soo baxday in la badalay taliyihii ciidamada baarlamaanka amnigiisa u xilsaarnaa Gaanshaanle Sare Xassan Jaamac Guuleed, waxaana xilkani loo dhaariyey Qaasim Xassan Fiidoow.
Xaalada khilaafka ciidamada gaaray uma sahlana labo taliye oo la’isku badalay kaliya ee waa mid kasii qotodheer, waxyaabaha durba farta lagu fiiqi karo waxaa ka mid ah in wasiirada muhiimka ah ee hawlaha amniga qaabilsan sida wasiirka amniga qaranka iyo kan gaashaandhiga iyo waliba taliyeyaasha ciidanka ay la kala safanyihiin labada dhinac ee is haya, tanina waxa ay keeni kartaa in amaro is diidan ay kasoo kala baxaan mas’uuliyiintani.
Mid ka mid ah waxyaabaha durba la tilmaami karo waxaa ka mid ah in golihii wasiirada ama wasaaradahoodii aysan wax shaqo ah qabanin muddo bil ka badan iyaga oo markii horaba gaabis ay ku jirtey shaqadooda. Dhibta jirta ee xaalada sii mujineysa ayaa ah in markii horaba wasiirada lasoo magacaabay ay ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka.
Wasiirada xildhibaanada ah ayaa iyaga oo isticmaalaya awoodooda fulineed iyo kheyraadkii dowladda waxa ay sii hurinayaan qalalaasaha baarlamaanka ka dhex jira, sidoo kale waa kuwa saacado badan ku mashquulsan abaabulka baarlamaanka ka dhex socda halkii ay shaqadooda qabsan lahaayeen.
Dadka caadiga ah ee shacabka ah waxa wali intooda badan ka daadagi la’ xikmadda ka dambeysa in wasiir uu gacmihiisa ku rido xukuumadii uu ka tirsanaa, isaga oo ku dhaliilaya waxqabad xumo, misane hadane filanayo in uu kusoo boxo xukuumada xigta ee lasoo dhisayo !
Mid ka mid dadkii hadlay ayaa yiri “Wasiirada xukuumadii ay ka tirsanaayeen gacmahooda ku ridaya waxa ay la mid tahay sidii sheekadii ninkii la oran jirey Juxaa ee inta geed fuuley, laantii uu saarnaa gadaal ka jarayay”.
Xildhibaan Dhuxuloow waxa uu guddoomiye ka yahay olog ay leeyihiin xildhibaanada mooshinka kasoo horjeeda, wuxuu sheegey in baarlamaanka mudo 2 bilood fasax ku maqnaa, bishii uu furnaana qalalaasahan uu waqtiga oga dhacay, in 2 bilood oo kasii horeysey fasaxa la abaabulayay hawshani mooshinka oo la carqaladeeyey shaqadii baarlamaanka uu qaban lahaa, wuxuu intaasi ku daray in xildhibaanada intii ay fasaxa ku jireen ay iyaga dhexdooda isa soo canaanteen, kuna soo talogaleen in illaa 30 hindise sharciyeed ay baarlamaanka mariyaan muddo afar bilood ah.
Balse waxa uu nasiib daro ku tilmaamay in hal hindise sharciyeed xitaa aanan la meelmarinin baarlamaanka, muddo 2 bilood ahna ay hadda tagtey.
Dib u dhaca weyn ee ku yimid hawlihii baarlamaanka uu qaban lahaa ayaa waxa ay keentey in sharciyadii la meelmarin lahaa ay is dul fuulfuuleen, gaar ahaan sharciyadii ugu muhiimsanaa ee buundada u ahaa Hiigsiga 2016-ka, xiligaasi oo la doonayo in doorashooyin la qabto, dalkana uu yeesho dastuur qabyo tiran, labo gole oo baarlamaan, lana dhamaystiro dhismaha maamul goboleedyada.
Inkasta oo ay hadda u egtahay in isfaham laga gaaray in cod baarlamaanka lagu kala boxo kaasi oo todobaadka dambe dhacaya, ayaa hadana qacda ka yeertey intii uu murankani socdey uusan ahayn mid laga soo sawaaqsan karo muddo dhow.